Maitiro Ekutsvaga Asingashandiswe CSS Masitaera mune yako Stylesheet | Martech Zone
Maitiro Ekutsvaga Asingashandiswe CSS Masitaera mune yako Stylesheet
Chitatu, Nyamavhuvhu 8, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Kunyangwe iwo ako masitaera akachengetwa, kekutanga munhu paanoshanyira saiti yako yakabviswa CSS faira inogona kunyatsononoka saiti yako pasi. Izvi hazvina kunyanya kukura kune yekutanga pfungwa. Sezvo saiti dzichikura, dzinowanzo wedzera nemawijeti matsva uye zvinhu izvo vagadziri vanoramba vachinyatsogadzirisa pamwe nekuwanda uye kwakawanda masheetet sarudzo. Nekufamba kwenguva, rako remastaetti rinogona kubhowa zvakanyanya uye kuve chikamu chakakosha che nei yako saiti kurodha pasi ichinonoka kupfuura vamwe.
Ndakaona mamwe maturusi eCSS ekuongorora kunze kwewebhu. Takashandisa Chenesa CSS kudzikisa saizi refaira nekuronga zvirinani nekusimbisa iyo data pairi. Paunenge uchishandisa wechitatu bato kuongorora yako saiti, iwe unofanirwa kungwarira, zvakadaro. Kana ivo vachikwenya peji rimwe uye voongorora CSS yako, chishandiso chinogona kunge iwe uchibvisa kudzikisa matani ezvitaera anoshandiswa pane mamwe mapeji.
Kwete mhosva ne CSS isina kushandiswa - chishandiso icho Andrew Baldock kubva kuMindjet, a kufunga mepu kunyorera, kwakandiratidza nezuro. Chishandiso chinokambaira saiti yako uye chinozivisa CSS isina kushandiswa. Iwe unogona kunyange kutarisa masitaera iwe aunoda kuchengeta zvisinei nekuongororwa. Kuti uiburitse pamusoro, unogona kurodha pasi masitayiti mushure mekumhanya kuburikidza neyekugadzirisa maitiro.
Douglas Karr paEdge yeWebhu Radio
Negative SEO Inoshanda!
Aug 15, 2012 pa 3: 41 AM
Aug 15, 2012 pa 3: 42 AM